တစ်လလျှင် 10 ကီလိုဂရမ်အားဖြင့်ကိုယ်အလေးချိန် - Keto Guru
တစ်လလျှင် 10 ကီလိုဂရမ်အားဖြင့်ကိုယ်အလေးချိန်
ကိုယ်အလေးချိန်ကျစေခြင်း၏ပန်းတိုင်များသည်၎င်းတို့ကိုအောင်မြင်ရန်နည်းလမ်းများနှင့်အလွန်ကွာခြားသည်။တစ်စုံတစ် ဦး ကကိုယ်ခန္ဓာသည်ပြင်းထန်သောစိတ်ဖိစီးမှုများကိုမခံစားရသည့်ချောမွေ့သောကိုယ်အလေးချိန်နည်းစေသည့်နည်းလမ်းနှင့်၎င်းကိုပိုင်ရှင်ကအမြဲတမ်းအစာငတ်နေသည်ဟုခံစားရသည်။အခြားသူများအတွက်မူ၎င်းတို့သည်တစ်လလုံးအတွက်အရာရာကိုကန့်သတ်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူသည်၊ သို့သော်ဤအချိန်အတွင်းကီလိုဂရမ်တစ်ဒါဇင်ကိုဆုံးရှုံးနိုင်သည်။အလျင်အမြန်ပြေးခြင်းသည်အဓိပ္ပာယ်ရှိသလော၊ တစ်လလျှင် ၁၀ ကီလိုဂရမ်အရှုံးရှိလျှင်ခန္ဓာကိုယ်မည်သို့ခံစားရမည်နည်း။ဒီရလဒ်အောင်မြင်ရန်လုံခြုံနည်းလမ်းများရှိပါသလား
တကယ်တော့ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်မှုမရှိဘဲ ၁၀ ကီလိုဂရမ်ဆုံးရှုံးခြင်းဟာခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ဟာပုံမှန်ထက်သိသိသာသာများပြီးခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်အညွှန်းကိန်း ၃၀ ထက်ပိုတဲ့သူတွေအတွက်တော့လက်တွေ့ကျပါတယ်။ ဆိုလိုတာကလူတစ် ဦး ရဲ့အမြင့် ၁၇၀ စင်တီမီတာနဲ့သူ့ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ဟာ ၁၀၀ ကျော်ပါတယ်။ကီလိုဂရမ်။ထို့အပြင် ၁၀ ကီလိုဂရမ်ကိုဖယ်ရှားပြီးနောက်သူသည်ကိုယ်အလေးချိန် ၁၀% သာဆုံးရှုံးမည်ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ကိုယ်အလေးချိန်အများဆုံးလက်ခံနိုင်သည့်နှုန်းကိုဆရာဝန်များကစဉ်းစားသည်။
သို့သော်မြန်ဆန်စွာဆုံးရှုံးလိုသူအများစုသည်ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ညွှန်းကိန်း ၂၅ မှ ၂၈ အထိရှိသည်။ BMI ၂၅ (စံ၏အမြင့်ဆုံးအမြင့်ဆုံးဖြစ်သည်) တွင် ၁၇၀ စင်တီမီတာရှိအလေးချိန်မှာ ၇၂ ကီလိုဂရမ်ခန့်ရှိသည်။အကယ်၍ သင်တစ်လလျှင် ၁၀ ကီလိုဂရမ်ဆုံးရှုံးလျှင်၊ ၁၄% သောအလေးများသည်ဆုံးရှုံးသွားလိမ့်မည်၊ ၎င်းသည်ကျန်းမာရေးအတွက်အတော်လေးမနှစ်မြို့ဖွယ်အကျိုးဆက်များရှိနိုင်သည်။
ထို့ကြောင့်၊ မိမိကိုယ်ကိုထိုကဲ့သို့သောလုပ်ငန်းတာဝန်မချခင်သင့်အတွက် ပို၍ အရေးကြီးသောအရာများကိုစဉ်းစားပါ - မည်သည့်ကုန်ကျစရိတ်ဖြင့်မဆိုသဟဇာတဖြစ်စေရန်သို့မဟုတ်ရည်ရွယ်ထားသောပန်းတိုင်ဆီသို့အနည်းငယ်အေးဆေးတည်ငြိမ်စွာဖြင့်သင့်ကိုယ်ခန္ဓာကိုမထိခိုက်စေဘဲစဉ်းစားပါ။
လူတိုင်းသည်အနည်းဆုံးအားစိုက်ထုတ်မှုဖြင့်အနည်းဆုံး ၃ လအတွင်း ၁၀ ကီလိုဂရမ်ကိုဆုံးရှုံးနိုင်သော်လည်းတစ်ချိန်တည်းမှာပင်အဆီပြန်ခြင်းသည်ပြန်မလာရန်အာမခံထားသည်။ မကြာခဏကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်းကဲ့သို့ဖြစ်လေ့ရှိသည်။
ကျန်းမာသန်စွမ်းသောကိုယ်ခန္ဓာနှင့်လှပသောအသားအရေ၊ လက်သည်းနှင့်ဆံပင်ကိုထိန်းသိမ်းလိုသူများအတွက် ၂ လတွင် ၁၀ ကီလိုဂရမ်ကိုတစ် ဦး တည်းမဟုတ်ဘဲဆုံးရှုံးခြင်းသည် ပို၍ ကောင်းသည်။သို့သော်သင်ကအစွန်းရောက်သောနည်းလမ်းများကိုအသုံးပြုလိုနေလျှင်သို့မဟုတ်သင့်အလေးချိန်သည်ပုံမှန်ထက်ပိုမိုမြင့်မားပါကလျှင်မြန်စွာကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်း၏ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောဆိုးကျိုးများကိုလျှော့ချရန်ကူညီသည့်အထွေထွေစည်းမျဉ်းများကိုလိုက်နာရန်အနည်းဆုံးကြိုးစားပါ။
တစ်နေ့လျှင်အနည်းဆုံး ၁. ၅ လီတာရေများများသောက်ပါ။ဤအရာသည်ကျောက်ကပ်နှင့်နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာစနစ်များအတွက်ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကိုလျော့နည်းစေပြီးအဆိပ်နှင့်အဆိပ်များကိုလျင်မြန်စွာဖယ်ရှားပေးနိုင်ပြီးလှပသောအသားအရေကိုထိန်းသိမ်းပေးသည်။
အဆင်ပြေသောအစားအစာများနှင့်စည်သွတ်ဘူးများအားလုံးကိုဖယ်ထုတ်ပါ။သူတို့မှာကိုယ်အလေးချိန်မြန်စေပြီးကိုယ်ခန္ဓာကိုအဆိပ်မဖြစ်စေတဲ့ဓာတုပစ္စည်းတွေပါ ၀ င်တယ်။
သင့်၏အစားအစာမှသကြား၊ မုန့်နှင့်ကုန်ပစ္စည်းများကိုဖယ်ရှားပါ။အကယ်၍ သင်သည်ချိုမြိန်သောအရာတစ်ခုခုကိုအမှန်တကယ်လိုလားလျှင်ပျားရည်သို့မဟုတ်သစ်သီးခြောက်တို့ကိုအနည်းငယ်မျှသာစားသုံးနိုင်သည်။
အာဟာရရှိသောအသားများကိုစားပါ - ကြက်၊ ရင်သား၊ နွားမ၊ အမဲသား၊ ယုန်။ထို့အပြင်၎င်းကိုရေနွေးငွေ့ဖြင့်ချက်ပြုတ်ခြင်းသို့မဟုတ်ပြုတ်ခြင်းထက်လွန်ကဲသောဖြစ်ရပ်များတွင်၎င်းကိုဆီထည့်ပြီးဒယ်အိုးထဲတွင်မထားပါနှင့်။
ပင်လယ်စာကိုစားပါ။ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုကိုမြင့်မားစွာထိန်းသိမ်းရန်ကူညီသည့်ဓာတ်သတ္တုအမြောက်အများနှင့်သဲလွန်စများပါ ၀ င်သောကြောင့်၎င်းတို့သည်အလွန်အကျိုးရှိသည်။
အရက်ဖြတ်ပါ။၎င်းသည်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိရေကိုထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည့်အပြင်၎င်း၏ယိုယွင်းပျက်စီးစေသောထုတ်ကုန်များသည်ကိုယ်ခန္ဓာကိုအဆိပ်ဖြစ်စေသည်၊ အသည်းနှင့်ကျောက်ကပ်ကိုအလွန်အကျွံနှင့် ဦး နှောက်ကိုဖျက်ဆီးသည်။အမျိုးသားများကဘီယာကိုပုံမှန်သောက်သုံးခြင်းသည်အမျိုးသမီးများတွင်အဝလွန်ခြင်းကိုဖြစ်စေသည်၊ အရက်တွင်သောက်သည့် phytoestrogens များပါဝင်သည်။
Carbohydrates - မနက်မှာ။သင်တစ်နေ့တာတွင်အသုံးပြုရန်အချိန်မရှိသောထိုဘိုဟိုက်ဒရိတ်များသည်သင်၏နံဘေးတွင်အဆီသွပ်ပုံစံဖြင့်တစ်ညတည်းနစ်ပါလိမ့်မည်။သင်တစ်လလျှင် ၁၀ ကီလိုဂရမ်ဆုံးရှုံးလိုလျှင် - ဘိုဟိုက်ဒရိတ်ညစာသည်သင်တို့အတွက်မဟုတ်ပါ!
ဖျော်ရည်နှင့်ဆိုဒါ။မည်သည့်ကာဗွန်နိတ်အချိုရည်သည်မဆိုအစာအိမ်နံရံကိုစိုစေပြီးရောင်ရမ်းစေနိုင်သည်။မီနူးတွင်လတ်ဆတ်သောဖျစ်ညှစ်ထားသောဖျော်ရည် ၁-၂ ခွက်ရှိပါသည်။
ဖိုင်ဘာပိုများလာပါ။ကြမ်းတမ်းသောအပင်အမျှင်များသည်တစ်ချိန်တည်းတွင်အသုံးဝင်သောလုပ်ငန်းသုံးခုကိုလုပ်ဆောင်သည် - သူတို့သည်ဆာလောင်မှုကိုကြာမြင့်စွာဖယ်ရှားပေးသည်၊ အူလမ်းကြောင်းလှုပ်ရှားမှုကိုလှုံ့ဆော်သည်၊အဓိကအရင်းအမြစ်မှာလတ်ဆတ်သောဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်သစ်သီးများ၊ ဖွဲနုများ၊
ဤစည်းမျဉ်းများအရ ၂ လအတွင်း ၁၀ ကီလိုဂရမ်ကိုသင်အလွယ်တကူဆုံးရှုံးနိုင်သည်။ ပုံမှန်အားကစားကိုသင်ထပ်ထည့်ပါကပိုမိုမြန်ဆန်သည်။
အရေးကြီးတယ်။အကောင်းဆုံးကတော့၊ ထိုကဲ့သို့သောအာဟာရဆိုင်ရာအခြေခံမူများသည်လူတိုင်းအတွက်စံဖြစ်သင့်သည်။ ဤကိစ္စတွင်အလေးချိန်သည် ၂ လမှ ၃ လအတွင်းအနည်းငယ်ကျဆင်းပြီးနောက်တည်ငြိမ်ပြီးခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်တူညီသောအဆင့်တွင်ဆက်လက်တည်ရှိလိမ့်မည်။
အစားအစာ ၁၀ မျိုး
"ငါ ၁၀ ကီလိုဂရမ်ပိုမြန်ချင်တယ်! " ဟူသောအတွေးကိုမစွန့်ပစ်သူများအတွက်ပိုမိုတင်းကျပ်သောအစားအစာအမျိုးအစားများကိုအင်တာနက်ပေါ်တွင်အဓိကထားလေ့ရှိသည်။အာဟာရဗေဒပညာရှင်များသည်အစွန်းရောက်သောနည်းလမ်းများကိုအလွန်မနှစ်သက်ပါ၊ အကြောင်းမှာ၎င်းတို့အများစုသည်ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုကိုနှေးကွေးစေပြီးကိုယ်ခန္ဓာအတွင်းရှိဗီတာမင်နှင့်ဓာတ်သတ္တုဟန်ချက်ကိုပျက်ပြားစေသည်။
အောက်ဖော်ပြပါ TOP-10 လူကြိုက်များသောအစားအစာများ, ကိုယ်အလေးချိန်ကျဆင်းသူတို့တွင်အဆိုးဆုံးမဟုတ်သောပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များမှာ
ထောပတ်။တစ်ပတ်အတွင်းကီလိုဂရမ်ဝက် (၉% အဆီအထိ) နှင့်အဆီဓာတ်တစ်လီတာတစ်ဝက်ကိုတစ်နေ့လျှင်စားသုံးကြသည်။တနေ့တဖြည်းဖြည်း 1-2 အသီး, တပြင်လုံးကိုစပါးကိုပေါင်မုန့်၏ 10-150 ဂရမ်ထည့်ပါ။
သက်သတ်လွတ်။အသား၊ ကြက်၊ ငါးကိုအစားအစာမှဖယ်ထုတ်ထားပြီးခက်ခဲသောပုံစံ - တိရိစ္ဆာန်မှထုတ်ကုန်များဖြစ်သည်။ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ - ကုန်ကြမ်းများသို့မဟုတ်ရေနွေးငွေ့သည်အစားအသောက်၏ ၈၀% ရှိသည်။
ဥ။နံနက်စာနှင့်ညစာ - ကြက်ဥ ၂ လုံး၊ အနက်ရောင်ပေါင်မုန့်တစ်ခွက်၊ လက်ဖက်ရည်။နေ့လည်စာအတွက် - အဆီနည်းသောအသားသို့မဟုတ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဟင်းရည်ပေါ်ဟင်းချို၊
ပရိုတိန်း။အစားအစာ၏အခြေခံသည်အဆီနည်းသောအစားအစာပြုတ်အသားများ (များသောအားဖြင့်ကြက်သားရင်သား) နှင့်ပြုတ်။ လတ်ဆတ်သောသို့မဟုတ်ကင်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များဖြစ်သည်။တစ်နေ့လျှင် 1-2 အသီးကိုသီးခွင့်ပြုခဲ့ရသည်။
Apple DietApple ။တကယ်တော့ mono-diet ဟာ ၇ ရက်ထက်ပိုပြီးမနေနိုင်တော့ဘဲပျမ်းမျှကိုယ်အလေးချိန်တစ်ကီလိုဂရမ်လောက်ရှိပါတယ်။အစားအစာတစ်ခုလုံးသည်ပန်းသီးနှင့်ရေ ၁. ၅ ကီလိုဂရမ်ဖြစ်သည်။
သီးနှံ။ဆားနှင့်ဆီမထည့်ဘဲရေတွင်ပြုတ်ပါ။တစ်နေ့လျှင် ၂ ကြိမ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်သုပ်ကိုသံပုရာရည်ထည့်ပြီးစားနိုင်သည်။၎င်းသည်တစ်လလုံးထိုင်ရန်အလွန်ခက်ခဲသည်။
ဖျော်ရည်။အသစ်သောညှစ်ထားသောသစ်သီးနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်အရည်များသာစားသောက်မှုတွင်ရှိသည်။သင်တစ်ပတ်ကျော်ကြာထိုင်ပါကသင့်အနေဖြင့် ၅ မှ ၁၀ ကီလိုဂရမ်ကိုဆုံးရှုံးနိုင်သည်။သို့သော်ကြာရှည်စွာအသုံးပြုခြင်းဖြင့်သွား၏ကြွေများကိုဖျက်ဆီးပစ်သည်၊ အစာအိမ်အတွင်းနာကျင်မှုများဖြစ်ပေါ်လာပြီးချုပ်ထွက်ခြင်းဖြစ်သည်။
အသီး။တစ်နေ့လျှင် ၂ ကီလိုဂရမ်အထိစားနိုင်သောဒိန်ချဉ်တွင်မချိုသောအသီးများသာကျန်ရှိသည်။အဆီနည်းသောနို့ထွက်ပစ္စည်းများနှင့်ကွဲပြားသောအစားအစာများကိုအစားထိုးခွင့်ပြုသည်။
ချောကလက်။တစ်နေ့လျှင်အကန့်အသတ်မဲ့ချောကလက် ၁၀၀ ဂရမ်နှင့်လက်ဖက်ရည်ကြမ်းကိုတစ်နေ့လျှင်အကန့်အသတ်ဖြင့်သာစားနိုင်သည့်အလွန်ခက်ခဲသည့် mono-diet အမျိုးအစားဖြစ်သည်။အစားအသောက်အလွဲသုံးစားမှုသည်ရောဂါအမျိုးမျိုးကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။
ကော်ဖီဆိုင်။ကော်ဖီတစ်ခွက်သည်အစာမစားမီ (တစ်နေ့ ၄-၅ ကြိမ်) သောက်သည်။ဤသည်ကသင့်အားအစာလျော့နည်းစေပြီးသင်၏ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုကိုမြန်စေသည်။သို့သော်၎င်းသည်နှလုံးကိုဖိအားနှင့်သွေးပေါင်ချိန်တိုးစေသည်။
မင်းသိတဲ့အတိုင်း၊ တစ်လအတွင်း ၁၀ ကီလိုဂရမ်ထိဖယ်ရှားပစ်နိုင်တဲ့ထိရောက်တဲ့အစားအစာအားလုံးဟာမျှတမှုမရှိပါဘူး။
ကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်းကိုနည်းမျိုးစုံဖြင့်ကြိုးစားရန်ကြိုးစားသူများ၏သုံးသပ်ချက်များသည်ပထမရက်သတ္တပတ်အပြီးယေဘုယျအားဖြင့်ကျန်းမာရေးအခြေအနေသိသိသာသာယိုယွင်းနေကြောင်းအတည်ပြုသည်။ဒါကြောင့်သည်းခံခြင်းသည်ကျိုးနပ်ပါသလား၊ သို့မဟုတ် ပိုမို၍ ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်သောနည်းလမ်းကိုရွေးချယ်ခြင်းသည်ပိုကောင်းပါသလား။
စူးရှသော Hepatic သို့မဟုတ် renal failure;
ကင်ဆာနှင့် autoimmune ရောဂါများ;
ပြင်းထန်သောကာယလှုပ်ရှားမှုနှင့် / သို့မဟုတ်ခွန်အားလေ့ကျင့်မှုပြုလုပ်နေစဉ်။
ဆေးသမားများအနေဖြင့်အစာစားခြင်းနှင့်အစာငတ်မွတ်သူများသည်တဖြည်းဖြည်းပုံမှန်အစာစားခြင်းကိုအနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည့်ပြင်းထန်သောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနာမကျန်းမှုဖြစ်သည့် Anorexia ကိုတဖြည်းဖြည်းဖွံ့ဖြိုးလာကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။လူလတ်တန်းစားများအတွက်ပထမဆုံးလက္ခဏာများကိုဖမ်းရန်အလွန်ခဲယဉ်းသည်။ရောဂါသည်အင်အားအပြည့်ဖြင့်ရောက်ရှိသောအခါအတွေ့အကြုံရှိသောစိတ်ပညာရှင်တစ် ဦး သာလျှင်၎င်းကိုဖယ်ရှားပစ်နိုင်သည်။အထူးဆေးခန်းတွင်နေရာချထားရန်မကြာခဏလိုအပ်သည်။
၁၀၀ ကီလိုဂရမ်သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသောအစအလေးချိန်ရှိသောကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုမပါဘဲတစ်လလျှင် ၁၀ ကီလိုဂရမ်ကိုဆုံးရှုံးနိုင်ပြီး ၂၀% စားသုံးသည့်အစားအစာကိုလျှော့ချနိုင်သည်။သို့သော်ဤနည်းဖြင့်ရရှိသောရလဒ်သည်သင်နှင့်မကိုက်ညီပါ။အဆီအလွှာမရှိဘဲကျန်ရှိနေသောလျင်မြန်စွာကျဆင်းနေသည့်ကိုယ်အလေးချိန်သည်မှုန်ဝါးသွားပြီး၎င်း၏ရှင်းလင်းသောအကြမ်းဖျင်းအားဆုံးရှုံးသည်။ထိုသူသည်လုံးဝပုံသဏ္elessာန်မရှိသောအရာဖြစ်လာသည်။ အရေပြားသည်တုန်ခါသွားပြီးကြွက်သားများသည်ခေါက်။ တွေ့နိုင်သည်။
တက်ကြွသောကာယလှုပ်ရှားမှုကသင့်အားကြွက်သားသေံကိုထိန်းသိမ်းရန်၊ ဇီဝဖြစ်စဉ်နှုန်းမြင့်မားစေရန်နှင့်ကယ်လိုရီလိုငွေပြမှုကိုတိုးမြှင့်ရန်သင့်အားခွင့်ပြုသည်။ ၎င်းသည်ပုံမှန်ပုံမှန်အစားအစာများကိုဖြတ်တောက်ခြင်းကြောင့်သာမကပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းများကြောင့်လည်းဖြစ်သည်။ပျောက်ကွယ်သွားသောအဆီအလွှာကိုတဖြည်းဖြည်းကြွက်သားဘောင်ဖြင့်အစားထိုးသည်၊ အရေပြားသည်တင်းမာ။ လှပနေဆဲဖြစ်သည်။
တစ်လလျှင် ၁၀ ကီလိုဂရမ်မည်မျှဆုံးရှုံးမည်နည်း
သံသယဖြစ်ဖွယ်အချက်တစ်ခုမှာတစ်လလျှင် ၁၀ ကီလိုဂရမ်ဆုံးရှုံးရန်နည်းလမ်းများသည်ကျန်းမာရေးကိုမထိခိုက်စေကြောင်းဖော်ပြသည်။ဤအကြောင်းကြောင့်၊ အာဟာရပညာရှင်များနှင့်ကြံ့ခိုင်ရေးသင်တန်းပို့ချများအပါအဝင်ပညာရှင်များ၏အကြံဥာဏ်များကိုနားထောင်ရန်အရေးကြီးသည်။ယေဘုယျအားဖြင့်မည်သည့်ကီလိုဂရမ်အရေအတွက်မဆိုတစ်လအတွင်းကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချခြင်းကိစ္စကိုသင့်အစားအစာကိုပြန်လည်သုံးသပ်ရန်နှင့်နေ့စဉ်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်များတွင်ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုအပါအ ၀ င်ပြည့်စုံစွာချဉ်းကပ်သင့်သည်။ရွေးချယ်စရာများစွာရှိပါသည် - သင့်တော်သောအာဟာရမှသည်ကယ်လိုရီကိုကန့်သတ်သည့် mono diets ။ကိုယ်အလေးချိန်လေ့ကျင့်ခန်းတွင်သင်လုပ်ချင်သောဇုန်ပေါ် မူတည်၍ မျိုးကွဲများရှိသည်။
အရိုးရှင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာအစားအစာကိုတားမြစ်ထားသောနှင့်ခွင့်ပြုထားသောနေရာများသို့ခွဲထုတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ဤအခြေခံမူကို ၄ ပတ်လုံးလုံးအစာစားခြင်းနှင့်တစ်ပါတ်အနည်းဆုံးအကြိမ်အနည်းငယ်လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်ခြင်း၊တားမြစ်ထားသောအစားအစာများစာရင်းတွင်
ဝက်အူချောင်းများ၊ mayonnaise၊ ketchup;
ပါ ၀ င်သည့်ကျန်းမာသောအစားအစာဖြင့်အစားထိုးပါ
အာလူး မှလွဲ၍ လတ်ဆတ်သော၊ စွပ်ပြုတ်၊
ဂျပန်အစားအစာ။ဒါဟာပရိုတိန်းများအသုံးပြုခြင်းအပေါ်အခြေခံသည်။၇ ရက်မှ ၁၄ ရက်အထိကြာနိုင်သည်။အစားအစာ၏အခြေခံတွင်ငါး၊ အသား၊ ကြက်ဥ၊ သံလွင်ဆီ၊ သစ်သီးများ၊
တိကျသောရည်မှန်းချက်ပေါ် မူတည်၍ သင်အစားအစာအတွက်ခွန်အားသို့မဟုတ်အေရိုးဗစ်လှုပ်ရှားမှုကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။မင်္ဂလာပါအဆုံးတွင်အဆီများလောင်ကျွမ်းခြင်းနှင့်အသံလျှော့ချခြင်းတို့တွင်ပိုမိုထိရောက်သည်။အစွမ်းသတ္တိရှိသောလေ့ကျင့်ခန်းများသည်အရေပြားကိုမချော်စေနိုင်ပါ။ ၎င်းသည်တစ်လအတွင်းလျှင်မြန်သောကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်းနှင့်အတူအထူးအရေးကြီးသည်။မည်သည့်ကိစ္စတွင်မဆိုသင်သည်ရိုးရိုးတောင်တက်သည့်လှေကားများနှင့်သာကန့်သတ်ထားပါကရုတ်တရက်အားကစားကိုမစတင်နိုင်ပါ။ပထမတစ်ခုမှာနွေးထွေးသော၊ ရှည်လျားသောလမ်းလျှောက်ခြင်း၊ ၁၅ မိနစ်ကြာလေ့ကျင့်ခြင်းများကိုသာပြုလုပ်သင့်သည်။ထိုအခါဝန်တဖြည်းဖြည်းတိုးမြှင့်စေနိုင်သည်။
အစားအသောက်များကြောင့်သာမကရိုးရှင်းသောစည်းမျဉ်းအချို့ကြောင့်ကိုယ်အလေးချိန်ကျနိုင်သည်။ယင်းတို့အနက်ပထမ ဦး ဆုံးမှာကယ်လိုရီစားသုံးမှုကိုမဖြစ်မနေလျှော့ချရန်ဖြစ်သည်။ဒါဟာဘာမဆိုဖြစ်နိုင်တယ်၊ အဓိကအချက်ကတော့မင်းမှာနေ့စဉ်စွမ်းအင်လိုအပ်ချက်ရှိနေတယ်။၎င်းသည်သင်စားသုံးသည်ထက်ကယ်လိုရီပိုမိုသုံးစွဲရန်ဖြစ်သည်။ဤနည်းအားဖြင့်ကိုယ်ခန္ဓာသည် ၄ ​​င်း၏မလိုအပ်သောစွမ်းအင်ကို ၄ င်း၏သိုလှောင်ထားမှုများမှထုတ်ယူလိမ့်မည်။ကယ်လိုရီများအပြင်၊ ရိုးရှင်းသောစည်းမျဉ်းများကိုလိုက်နာရန်လည်းအရေးကြီးသည်။
အစားအစာကို 1500-2000 kcal နှင့် 200-250 g အထိလျှော့ချနိုင်သည်။
တစ်နေ့လျှင် ၄-၅ ကြိမ်စားပြီး ၃-၄ နာရီအစာစားချိန်ကြားတွင်အားလပ်ချိန်များကိုလေ့လာသည်။
သည်ညနေ ၆ နာရီအပြီး၌အစာကိုကန့်သတ်မထားပါ။ ညအိပ်ရာမ ၀ င်မီ ၃-၄ နာရီအကြာတွင်ညစာစားရန်ပိုသည်
ထမင်း၊ ချက်ပြုတ်၊ မုန့်ဖုတ်၊
ဂျင်း၊ သစ်ကြံပိုး၊ ငရုတ်ကောင်း၊ နနွင်းနှင့်မုန်ညင်းစသည့်အမွှေးအကြိုင်များအသုံးပြုပါ။
သင့်လျော်သောအာဟာရတစ်လလျှင် ၁၀ ကီလိုဂရမ်
အထက်ပါစည်းမျဉ်းများသည်အာဟာရကဲ့သို့သောအစားအစာအမျိုးအစားများနှင့်လည်းသက်ဆိုင်သည်။ဒီနည်းစနစ်ကိုဘဝလမ်းစဉ်တစ်ခုတောင်မှထည့်သွင်းစဉ်းစားသော်လည်း၎င်းသည်၎င်း၏မူများကိုမည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုလိုက်နာနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။အခြေခံအားဖြင့်လူတစ် ဦး လိုအပ်သောပရိုတင်းပမာဏနှင့်ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်ပမာဏမျှတသောအစားအစာဖြစ်သည်။အစားအစာတွင်သကြားလုံးများကိုမဖယ်ရှားပါ၊ သို့သော်၎င်းတို့သည်ကျန်းမာသင့်သည်၊ ဥပမာ၊ marshmallows, cheesecake, marmalade သို့မဟုတ်ပုံမှန် curd casserole ။ကောင်းမွန်သောအစာအာဟာရ၏အဓိကဟင်းလျာများမှာလည်းကျန်းမာပြီးအရသာနည်းသည်။သငျသညျကိုအောက်ပါအသေးစိတ် menu ကိုလေ့လာနိုင်ပါတယ်။
သင့်လျော်သောအာဟာရပုံစံဖြင့်အစားအစာ၏အဓိကနိယာမမှာမနက်စာဖြစ်သည်။၎င်း၏မရှိခြင်းကိုသင်ညနေခင်းတွင်အလွန်အမင်းစားသုံးမိစေသည်။နံနက်ယံ၌သင်သည်ချိုသောအရာတစ်ခုခုကိုစားနိုင်သည်။နေ့လည်စာတွင်ဘိုဟိုက်ဒရိတ်နှင့်ပရိုတိန်းအချို့ပါဝင်သင့်ပြီးညစာတွင်ပရိုတိန်းသာပါဝင်သင့်သည်။ဤနိယာမများကို အခြေခံ၍ နမူနာမီနူးတစ်ခုကိုအောက်ပါအတိုင်းရေးစပ်နိုင်သည် -
နံနက်စာ - ပေါင်မုန့်၊ အသီးသေး၊ သုပ်အစိမ်းနှင့်သံပုရာလက်ဖက်ရည်ပါသောဆန်၊
သရေစာ - ဒိန်ချဉ်၊ အိမ်တွင်းဒိန်ခဲ၊ သစ်သီး၊
နေ့လည်စာ - ဟင်းသီးဟင်းရွက်အသုပ်ပါ ၀ င်သောအဆီနည်းသောငါးများ၊
နေ့လည်ခင်းလက်ဖက်ရည် - အခွံမာသီးများသို့မဟုတ်သစ်သီးခြောက်များ
ညစာ - ထမင်းဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်အမဲသား၊ ထမင်းဟင်း၊ ပေါင်မုန့်နှင့်ရေ၊
ထိရောက်သော ၁၀ ကီလိုဂရမ်ကိုယ်အလေးချိန်ရှိသောအစားအစာများ
သင့်တော်သောအာဟာရရှိသော်လည်းရလဒ်ကောင်းများရသော်လည်းလူအများစုမှ“ တစ်လလျှင် ၁၀ ကီလိုဂရမ်ခန့်ကိုယ်အလေးချိန်ကျဆင်းသည်” အမျိုးအစားမှအစားအစာများကိုရွေးချယ်ကြသည်။များစွာသောထိရောက်သောနည်းစနစ်များကိုဤနေရာတွင်ခွဲခြားနိုင်သည်။အပြင်းထန်ဆုံးရွေးချယ်စရာမှာအမြန်အစားအစာများဖြစ်ပြီးအစားအစာတစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုအားကန့်သတ်ထားသည်။ရေဆုံးရှုံးမှုကြောင့်၎င်းတို့၌ကိုယ်အလေးချိန်ကျသည်။သင်ကိုယ်အလေးချိန်မြန်မြန်ဆုံးရှုံးနိုင်သည့်ပရိုတင်းဓာတ်စာသည်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကိုနှစ်သက်သည်၊ အကြောင်းမှာပရိုတိန်းသည်သဘာဝအဆီလောင်ကျွမ်းသောကြောင့်ဖြစ်သည်။အသားဓာတ်ကိုအကန့်အသတ်နှင့်အပင်အစားအစာများကိုအဓိက ထား၍ သက်သတ်လွတ်စားသုံးသည့်နည်းလမ်းသည်အလွန်ကောင်းသောရလဒ်များရရှိသည်။
Kefir အစားအစာများကိုအလွန်ထိရောက်သောအစားအစာများအဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ကိုယ်အလေးချိန်ကျရန်တစ်လမျှမလိုတော့ဘဲ ၁၀ ရက်သာကြာသည်။သင်တစ်နေ့လုံးအစာမစားနိုင်ဘဲရေကိုသာသောက်သည့်အခါ၎င်းတို့ထဲမှတစ်ခုသည်ချသင့်သည်။ကျန်ရှိသောရက်များသည်အခြေခံအားဖြင့် ၂. ၅% ထက်ပိုသောအဆီပါဝင်သောကေဖီဖြစ်သည်။ထုတ်ကုန်အမျိုးအစားတစ်မျိုးကို၎င်းကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းထည့်သည်။
၁ - ၄၀၀ ဂရမ်အဆီနည်းသောအိမ်တွင်းဒိန်ခဲ၊
၂ - ကြက်သားအသားပြုတ် ၅၀၀ ဂရမ်၊
၃ - အသီး ၅၀၀ ဂရမ်၊
၄ - လတ်ဆတ်သောဟင်းသီးဟင်းရွက် ၅၀၀ ဂရမ်၊
၅ - အစာရှောင်ခြင်းနေ့၊
၆-၁၀ ရက် - နေ့စဉ်ပထမ ၄ ရက်မည်သည့်ရိက္ခာများမှမဆို။
အဓိကကွာခြားချက်မှာအသားရှားပါးခြင်းဖြစ်သည်။တားမြစ်ထားသောအစားအစာများတွင်ကော်ဖီ၊ အရက်နှင့်ငရုတ်သီးတို့ပါဝင်သည်။ဤကိစ္စတွင်နေ့စဉ် menu တွင်အောက်ပါထုတ်ကုန်များနှင့်ဟင်းပွဲများပါဝင်နိုင်သည်။
အနိမ့်အဆီ kefir၊ နို့နှင့်အိမ်တွင်းဒိန်ခဲ၊
နောက်ထပ်ကောင်းမွန်သောရွေးချယ်စရာတစ်ခုမှာပရိုတင်းဓာတ်ပါသောအစားအစာဖြစ်သည်။ထို့အပြင်၎င်းသည်ကြွက်သားသေံကိုထိန်းသိမ်းရန်ကူညီသည်။အခြေခံနိယာမကဘိုဟိုက်ဒရိတ်ကိုလုံးဝနီးပါးကန့်သတ်ထားသည်။သူတို့ကပရိုတိန်းနဲ့အစားထိုးနေကြသည်။ဒီအစားအစာကိုလေ့ကျင့်ခန်းနဲ့လတစ်လလုံးပေါင်းစပ်ဖို့အကြံပြုထားတယ်။ဤသည်ခန္ဓာကိုယ်ပုံဖော်ကူညီပေးပါမည်။တစ်လအတွက်နမူနာ menu ကို:
နံနက်စာ - နို့သို့မဟုတ်အခြားအချဉ်ပေါက်သောနို့ရည်၊
ရေစာ - ဆန်ဂျုံယာဂု ၁၅၀ ဂရမ်၊
နေ့လည်စာ - ဟင်းသီးဟင်းရွက်များနှင့်အဆီနည်းသောဟင်းရည်ထဲထည့်ထားသောဟင်းသီးဟင်းရွက်များသို့မဟုတ်ဟင်းချိုတစ်ခွက်နှင့်အတူပိန်သောအသား၊
နေ့လည်လက်ဖက်ရည် - သဘာဝဒိန်ချဉ်နှင့်အတူအိမ်တွင်းဒိန်ခဲ၊
ညစာ - ကြက်ဥ ၂ လုံး၊ ငါးတစ်ပိုင်း၊
အိပ်ရာမ ၀ င်မီ - လတ်ဆတ်သောလိမ္မော်သီးသို့မဟုတ်ပန်းသီးတစ်ခွက်။
တစ်လခန့်အစာအာဟာရစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအပြင်ကိုယ်အလေးချိန်ပိုမိုထိရောက်စေရန်လေ့ကျင့်ရေးစနစ်တစ်ခုတီထွင်ရန်အကြံပြုပါသည်။သင်အိမ်၌လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းသို့မဟုတ်အားကစားရုံသို့သွားခြင်းပေါ်မူတည်သည်။တစ်လအတွက်အစီအစဉ်ရေးဆွဲရာတွင်အမျိုးသမီးများသည် cardio ကိုအာရုံစိုက်သင့်သည်။ ၎င်းသည်အစားအစာနှင့်အတူအဆီကိုပိုမိုထိရောက်စွာလောင်ကျွမ်းစေသည်။အမျိုးသားများသည်ကြွက်သားများတည်ဆောက်ရာတွင်အထောက်အကူပြုသည့်ပြင်းထန်သောစွမ်းအင်ဝန်များအတွက်ပိုမိုသင့်တော်သည်။လေ့ကျင့်ခန်းများရွေးချယ်ရာတွင်သူတို့၏ရှုပ်ထွေးမှုကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပါ။
အိမ်မှာတောင်မှသင်က dumbbells နှင့် weight လေးခုနှင့်အတူထိထိရောက်ရောက်လုပ်နိုင်သည်။လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခု၏အစသည်ဥပမာအားဖြင့်ကာဒီယိုသို့မဟုတ်အခြားအရိုးရှင်းဆုံးလေ့ကျင့်ခန်းများဖြစ်သည်။လေ့ကျင့်ခန်း၏အဆုံး၌, သင့်လျော်သောကြွက်သားဖွဲ့စည်းရန်အဘို့အဆန့်ပုံစံ၌အအေးရန်အကြံပြုသည်။အဓိကအစုံသည် ၈-၁၀ ကြိမ်မြောက် ၃ စုံဖြင့်ပြုလုပ်သောအောက်ပါလေ့ကျင့်ခန်းများပါဝင်နိုင်သည်။
စက္ကန့် ၃၀-၆၀ အတွင်း
"ကတ်ကြေး" သို့မဟုတ် "စက်ဘီး" ။
အားကစားခန်းမအတွက်လေ့ကျင့်ခန်းများကိုဒီဇိုင်းဆွဲခြင်း၏အခြေခံမူမှာတူညီနေဆဲဖြစ်သည်။လေ့ကျင့်ခန်းဆိုင်ကယ်၊ ellipsoid ကို cardio ဝန်အဖြစ်အသုံးပြုရန်အကြံပြုသည်။အခြေခံလေ့ကျင့်ခန်းများသည်အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်နိုင်သည်။
အဆိုပါ Simulator အတွက်
ခြေထောက် extension ကို;
အဆိုပါ Simulator အတွက်ခြေချောင်းအပေါ်ပြုစုပျိုးထောင်
အဆီလောင်ကျွမ်းခြင်းလေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုလျှင်တစ်လလျှင် ၁၀ ကီလိုဂရမ်
ကြားဖြတ်နှင့်ဆားကစ်လေ့ကျင့်မှုကိုအဆီလောင်ကျွမ်းခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုထိရောက်သည်ဟုယူဆသည်။သူတို့ကပိုပြီးပြင်းထန်တယ်။အထူးသ, ကြားကာလလေ့ကျင့်ရေး 20 စက္ကန့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုနှင့် 10 စက္ကန့်ကြွင်းသောအရာရှုပ်ထွေးသော၏4မိနစ်တစ်ခု alternation ဖြစ်ပါတယ်။ထိုကဲ့သို့သောလုပ်ဆောင်မှုများအတွက်ပြtheနာပေါ် မူတည်၍ မည်သည့်လေ့ကျင့်ခန်းကိုမဆိုရွေးချယ်နိုင်သည်။ထိုင်ခုံများ၊ အဆုတ်များ၊ တွန်းထုတ်မှုများ၊ စာနယ်ဇင်းများပေါ်တွင်အကြပ်အတည်းများစသည်တို့သည်သင့်လျော်သည်။ အသိုင်းအဝိုင်းလေ့ကျင့်ခန်းသည်လေ့ကျင့်ခန်းများစွာကိုစဉ်ဆက်မပြတ်လုပ်ဆောင်ခြင်းတွင်ပါဝင်သည်။
လေ့ကျင့်ခန်း "စက်ဘီး" ။
ငါအစားအစာများကိုမကြိုက်ဘူး, ဒါကြောင့်ရိုးရှင်းတဲ့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေအတိုင်းလိုက်ရုံနဲ့ကိုယ်အလေးချိန်ကျဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။တစ်နေ့ကို 1500 kcal အထိသူမအစားအသောက်ကန့်သတ်ထားသည်။ချိုမြိန်, ဖက်တီး, ကြော်။ငါနေ့တိုင်းအလင်းလေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်ဆန့်ကိုပြု၏။တစ်လကြာရင် ၈ ကီလိုဂရမ်သာကိုယ်အလေးချိန်ကျခဲ့တယ်။
ကျွန်ုပ်တွင်အစာအိမ်ပြproblemsနာများရှိပါသည်၊ဆရာ ၀ န်တစ် ဦး ၏အကြံပေးချက်အရကျွန်ုပ်သည်သင့်လျော်သောအာဟာရကိုပြောင်းလိုက်သည်။စက်ဘီးစီးတာဒါမှမဟုတ်စက်ဘီးစီးတာနဲ့ပဲကျွန်တော် cardio လုပ်ခဲ့တယ်။တစ်လအတွက်စုစုပေါင်း ၁၀ ကီလိုဂရမ်ပိုများတယ်၊ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော့်ကိုယ်အလေးချိန်ကအစကြီးလွန်းလို့အထူးအစားအစာမပါပဲတောင်မှကိုယ်အလေးချိန်ကိုတက်နိုင်ခဲ့တယ်။
အာဟာရချို့တဲ့မှုကိုဆန့်ကျင်တဲ့အာဟာရပညာရှင်တွေဟာဘာကြောင့်စည်းလုံးညီညွတ်တဲ့မျက်နှာစာမှာရှိနေရတာလဲလူတို့တွင်ဖြစ်ပွားသောရောဂါအများစုသည်ဗီတာမင်နှင့်သတ္တုဓာတ်နည်းပါးသောအာဟာရချို့တဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်ဟုထင်မြင်ချက်ရှိသည်။ထင်ရှားသောဥပမာတစ်ခုမှာ scurvy ဟုခေါ်သည်။သာမန်အက်စ်ကောဘစ်အက်စစ် (ဗီတာမင်စီ) ဖြင့်ကုသနိုင်သည်။
အကယ်၍ အမျိုးသမီးတစ် ဦး သည်စားသုံးသောကယ်လိုရီပမာဏကိုလျှော့ချရန်အတွက်အစားအသောက်ကိုဖြတ်တောက်ပါကအလေးချိန် ၁၀ ကီလိုဂရမ်သို့မဟုတ်ထို့ထက်ပိုသောအလေးချိန်များကျဆင်းခြင်းကြောင့်၎င်းသည်သာယာဝပြောမှု၊ ဆံပင်နှင့်လက်သည်းများနှင့်အရေပြားဖျော့ဖျော့များဖြစ်ပေါ်လာစေသည်။သို့သော်ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်စေခြင်းမရှိဘဲတစ်လလျှင် ၁၀ ကီလိုဂရမ်ဆုံးရှုံးရန်အမှန်တကယ်နည်းလမ်းရှိပါသလား။ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒါကပုံမှန်အာဟာရပါ။
တစ်လလျှင် ၁၀ ကီလိုဂရမ်မည်မျှဆုံးရှုံးမည်နည်း။ဤသို့ပြုရန်သင်မှော်ဆေးပြားများ (အီလီနာမာလစ်ရှာဗာ၏အစားအစာကဲ့သို့) သပ်သပ်ရပ်ရပ်ပေါင်းလဒ်ကိုထုတ်ပေးရန်တောင်းဆိုသောခေတ်မီနည်းပညာများကိုရှာဖွေရန်မလိုအပ်ပါ။ ၎င်းသည်ကိုယ်အလေးချိန်ကျသင့်သည့်အာဟာရဓာတ်အခြေခံမူကိုသိရှိပြီးလိုက်နာရန်လုံလောက်သည်။တစ်ချိန်တည်းမှာပင်အစာအိမ်နှင့်နှစ်ဖက်စလုံးသာမကကိုယ်အလေးချိန်သာမကမျက်နှာ၊ လက်များ၊ ခြေထောက်များနှင့်ကိုယ်ခန္ဓာတစ်ခုလုံးပါ ၀ င်သည်။
ကိုယ်အလေးချိန်ကျသည့်လူတစ် ဦး ၏လူနေမှုပုံစံကို ပို၍ တက်ကြွစွာပြုလုပ်လေကျန်းမာရေးအတွက်အန္တရာယ်မရှိဘဲပိုမိုတိုတောင်းသောအချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်းသူရရှိနိုင်ပါသည်။၁၀ ကီလိုဂရမ်ကိုအောင်မြင်စွာဆုံးရှုံးရန်အတွက်ကယ်လိုရီပိုမိုသုံးစွဲခြင်းသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။သင်ရွှေ့လေလေကြာကြာလေလေဖြစ်သည်။
တစ်လအတွင်းကိုယ်အလေးချိန်မချမီသင့်အစားအစာမှတဆေးပါသောကုန်ပစ္စည်းများကိုချန်လှပ်ထားပါ။အကယ်၍ သင်သည်မုန့်မပါဘဲမစားနိုင်ပါက၎င်းကို pita ပေါင်မုန့်သို့မဟုတ်တဆေးမဲ့မုန့်နှင့်အစားထိုးပါ။
မီးဖို၌သို့မဟုတ်မီးဖို၌ချက်ပြုတ်ထားသောအစားအစာအသားများ (ကြက်သားရင်သား၊ အမဲသား) နှင့်ငါးများကိုပိုစားပါ။
ကြည်နူးဖွယ်နံနက်စာစားပြီးညစာကိုရှောင်ပါ။အကောင်းဆုံးကတော့နံနက်စာဟာမင်းရဲ့နေ့စဉ်ကယ်လိုရီ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော်ပါဝင်သင့်တယ်။ညစာအတွက်တော့ပေါ့ပါးပြီးအိပ်ချိန်မဝင်ခင်ငါးနာရီမပြည့်မီ၊
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘယ်တော့မှငတ်မွတ်မသွားပါနှင့်။ဆာလောင်မွတ်သိပ်နေသောအစာအိမ်သည်ကိုယ်အလေးချိန်ကျသည့်အဆိုးဆုံးရန်သူဖြစ်သည်။အဆက်မပြတ်စားလိုသောဆန္ဒသည်အစာအိမ်၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးရန်မလိုဘဲအာဟာရဓာတ်စနစ်ကိုပြတ်တောက်စေသည်။ပန်းသီး၊ သစ်သီးခြောက်၊ အဆီနည်းသောကဖ်၊ အိမ်တွင်းဒိန်ခဲသို့မဟုတ်ဒိန်ချဉ်နှင့်အတူရေစာစားပါ။
အကယ်၍ သင်တစ်လလျှင် ၁၀ ကီလိုဂရမ်ဆုံးရှုံးပြီးသင့်ကျန်းမာရေးကိုမထိခိုက်လိုပါကသင့်အစားအစာ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းသည်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ သစ်သီးများနှင့်သီးနှံများဖြင့်ပြုလုပ်သင့်ကြောင်းသတိရပါ။ကျန်အပိုင်းများကိုအသားနှင့်နို့ထွက်ပစ္စည်းများဖြင့်ပြည့်နှက်နေသည်။လိုအပ်သောကယ်လိုရီများကိုထည့်သွင်းစဉ်း စား၍ ဤအရာအားလုံးကိုနေ့စဉ်စားသုံးသင့်သည်။
အိမ်၌တစ်ပတ်လျှင် ၅ ကီလိုဂရမ်လျှင်မြန်စွာကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်းနည်းလမ်းများ - အာဟာရဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများနှင့်ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု။ချက်ပြုတ်နည်းများနှင့်အတူအစားအသောက်ရွေးချယ်စရာ။သတိထား